မဟာဘူတ - ဝီကီပီးဒီးယား
မဟာဘူတ (သို့) မဟာဘုတ် ဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ပါဠိကျမ်းစာများတွင်ပါရှိကာ အခြေခံအကျဆုံး ဓာတ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ ပထဝီဓာတ်၊ တေဇောဓာတ်၊ အာပေါဓာတ်၊ ဝါယောဓာတ် တို့ဖြစ်ကြကာ ပါဠိဘာသာအားဖြင့် စတ္တာရော မဟာဘူတ (cattāro mahābhūtāni) ဟူ၍ ခေါ်ဆိုသည်။ မဟာဘူတကို ဟိန္ဒူဘာသာ၏ သင်္သကရိုက်ဘာသာစကားတွင်လည်း သုံးနှုန်းကြ၍ ယင်း၌ မြေ၊ ရေ၊ လေ၊ မီး အပြင် အကာသဓာတ် (space) ဆိုသည့်အရာပါဝင်သောကြောင့် ဓာတ်ငါးပါးဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် ဓာတ်ကြီးလေးပါး (catudhātu) ကို မဟာဘူတ ဟူ၍ သုံးနှုန်းကား မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် မဟာဘုတ် ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။ ဤဓာတ်ကြီးလေးပါးတို့မှ အလုံးစုံသော ရုပ်တရားတို့သည် ပေါက်ဖွားကြသောကြောင့် လယ်တီဆရာတော်က မဟာဘုတ်ကို အလွန်ကြီးပွားတတ်သည့်သဘောဟု အနက်ဖွင့်သည်။ အောက်ပါရှင်းလင်းချက်တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာအယူအဆသဘောတရားများဖြစ်ကြသည်။ 
ပထဝီဓာတ်ဆိုသည်မှာ မြေဓာတ်ဖြစ်သည်။ မြေဓာတ်ဆိုသည်မှာ ရုပ်တရားတို့၏ တည်ရန်၊ မှီရန် အမာခံသဘော ဖြစ်သည်။ ထိုမြေဓာတ်သည် ခက်မာမျိုး၊ ခက်မာသည်ထက် ခက်မာမျိုး၊ နူးညံ့မျိုး၊ နူးညံ့သည်ထက် နူးညံ့မျိုးဟူ၍ အဆင့်ဆင့်ရှိသည်။
အာပေါဓာတ်ဆိုသည်မှာ ရေဓာတ်ဖြစ်သည်။ ရေဓာတ်ဆိုသည်မှာ ရုပ်တရားတို့ကို အတုံးအခဲ ဖြစ်စေရန် ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။ ထိုရေဓာတ်သည် ဖွဲ့စည်းမှု အတင်းအလျော့ ရှိသည်။
တေဇောဓာတ်ဆိုသည်မှာ မီးဓာတ်ဖြစ်သည်။ မီးဓာတ်ဆိုသည်မှာ ရုပ်တရားတို့ကို လောင်မှု၊ မြိုက်မှု၊ ရင့်စေမှု ဖြစ်သည်။ ထိုလောင်မြိုက်မှုသည် ပူ၍လောင်မှု၊ အေး၍လောင်မှုဟု နှစ်မျိုး ရှိသည်။
ဝါယောဓာတ်ဆိုသည်မှာ လေဓာတ်ဖြစ်သည်။ လေဓာတ်ဆိုသည်မှာ ထောက်ကန်မှု ဖြစ်သည်။ ထိုလေဓာတ်သည် ထောက်ကန်လေ၊ ထမ်းဆောင်လေ၊ တွန်းဝှေ့လေ၊ တိုင်လွှင့်လေဟူ၍ အမျိုးမျိုး ရှိသည်။
↑ Gopal၊ Madan (1990)။ K.S. Gautam (ed.)။ India through the ages။ Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India။ p. 79။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ ၄.၃ ၄.၄ လယ်တီဆရာတော် (ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၇)။ လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ် − ဝိပဿနာဒီပနီ။ မိခင်ဧရာဝတီစာအုပ်တိုက် location = ရန်ကုန်။ pp. ၂၀။ line feed character in |publisher= at position 23 (အကူအညီ); Missing pipe in: |publisher= (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မဟာဘူတ&oldid=682792" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။